Taxanaha Geeta ee ugu Fiican Soosaaraha Laydhka Shadowless iyo Warshad | Fepton
Taxanaha Geeta LED Shadowless Light
Nooca: Iftiin aan hoos lahayn
Tusaale: Geeta 500/600/550/650
Naqshad mesh Ultra-caato ah, qulqulka hawada laminar ee bilaa xayiraada ah iyada oo loo marayo naqshadda mesh god-dheer, oo la kulmi doona shuruudaha qolka qalliinka socodka qulqulka qulqulka qulqulka leh. Intii lagu guda jiray qalliin dheer, dhakhtarka qalliinka wuxuu u baahan yahay iftiin xoog leh, cad, aan dhalaalayn si uu u gaaro saameyn muuqaal oo raaxo leh. Naqshadeynta indhaha ee sheygan ayaa si buuxda uga kooban qaab dhismeedka jirka ee indhaha si loo hubiyo raaxada ugu badan ee indhaha. Marka laydhka 'Geeta 650' ee qallalan ee aan hooska lahayn loo shido, waxaa lagu bilaabay 71% dhalaalka ugu habboon aragga. Oo nuurkuna si xor ah ayaa loogu habeyn karaa inta u dhexeysa 5% -100%, daalka indhaha ee dhakhtarka ayaa magdhow la siin karaa inta lagu jiro hawlgalka. Shaqada xusuusta dhijitaalka ah ayaa si otomaatig ah u duubi doonta iftiinka ku habboon, mana aha baahi loo qabo in la hagaajiyo markii ay mar labaad daarto.
Iftiin aad u fiican
Saameyn wanaagsan oo fuuq bax ah
Fududeeyaha iyo xakamaynta weyn ee gacanta
Shucaaca aan UV ahayn iyo iftiinka qabow
Qoto dheer iftiinka iftiinka
4,300k heerkulka midabka
Habka xakamaynta dareenka leh ee fudud
Nidaamka ganaax fudud
160,000 lux (heerka 6)
Midab kuleylka. tusmo
Fursadaha rakibaadda badan
saqafka, mobilada, rakibaadda saqafka laba jibbaaran
7.8 inji (wareeg) / 11.8 inji (wareeg)
600 madaxa fudud
500 madaxa fudud
Ballaca Madaxa Fudud
740mm 4 qaybo guddi ah
740mm 3 qaybo guddi ah
40000-160000x, 10 heerarka xakamaynta hoosaadka
10 heerarka xakamaynta hoosaadka,
10 heerarka xakamaynta hoosaadka
Maxium Lights Intensity (Lux)
18-28cm, 5 heer
Tilmaamaha Midabaynta Midabka
Qoto dheer ee Iftiiminta
> 60000 saac
Qalabka Caafimaadka ee Isbitaalka Nalalka Qalliinka ee Aan Hooska Lahayn ayaa si xirfadaysan oo wanaagsan loogu buuxiyay kartoon warqad ah, dhammaan qeybaha si wanaagsan ayaa loo soo buuxiyay, oo ammaan ugu filan in lagu raro hawada, badda iyo kuwa kale.
Waxaa la aasaasay 2009, Shanghai Fepdon Medical Qalabka Co., Ltd waa soo saare xirfadle ah oo ku hawlan cilmi-baarista, horumarinta, wax soo saarka, iibinta iyo adeegyada suumanka caafimaadka, iftiinka hawlgalka, miiska hawlgalka iyo nidaamka gaaska caafimaadka.
Warshaddeenu waxay ku taalaa No. 265 Chuangyun Road HeQiong Industrial park, Pudong degmada cusub, Shanghai, Shiinaha. Warshadeenu waxay daboolaysaa 7000㎡, in kabadan 200 oo shaqaale ah iyo 10 injineero sare ah; waxay leedahay aqoon isweydaarsi alxanka, aqoon isweydaarsiga farsamada, aqoon isweydaarsiga shirarka, aqoon isweydaarsiga bakhaarka, iwm. In ka badan 10 sano oo khibrado R&D ah, waxaan u dhoofinnay wax soo saarkeenna in ka badan 30 dal.
waan sii wadaynaa dadaallada aan ku soo saarayno alaab cusub oo cusub si aan ula kulanno baahida macaamiisheena waaweyn.
Hada badeecadaheena badankood waxaa ansaxiyay CE, ISO9001: 13485, ECM, TUV, NQA oo shahaadeeyay. iwm
Hadafkeenu waa in aan bixino xalka ugu fiican ee xalalka caafimaad ee cosbitaalada iyo xarumaha caafimaadka aduunka.
1. Sidee ku saabsan waqtiga dhalmada shirkaddaada?
Waxaan amarkaaga gelinay jadwalkayaga wax soo saar adag, hubi waqtigaaga bixinta. Warbixinta soosaarka / kormeerka kahor amarkaaga oo aan laxirin. Ogeysiiska rarida / caymiska isla markaaba amarkaaga la diro.
2. Sidee ku saabsan adeeggaaga iibka kadib?
Waxaan qadarinaynaa quudintaada kadib markaan helno alaabada. Waxaan bixinaa 12-24 bilood oo damaanad ah kadib markay alaabtu timaado. Waxaan ballanqaadeynaa dhammaan qaybaha dayactirka ee la heli karo inta la nool yahay. Waxaan kaga jawaabeynaa cabashadaada 48 saac gudahood.
3. Sidee ku saabsan noloshaada ee alaabooyinka?
damaanad: 10 sano. la xiriir qofka iibka ah isla markiiba haddii su'aal kasta. Soo-saare china nal jaban oo horseed u ah nalalka qolka qalliinka.
4. Maxaad siisay?
waan bixin karnaa iibin xirfad leh Waxaan qiimeyneynaa baaritaan kasta oo naloo soo diro, waxaan hubinnaa dalab tartan deg deg ah. Waxaan iskaashi la leenahay macaamiisha si aan u soo bandhigno qandaraasyo. Bixi dhammaan dukumiintiyada lagama maarmaanka ah. Waxaan nahay koox iib ah, oo leh dhammaan taageerada farsamada kooxda injineerada.
Hore: Hal Gacmeedka Xarunta 'Endoscopy Pendant' oo leh Laba Muujin
Xiga: Woosen light light qalliinka